Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Edmonton oo shir isugu yimid ay ku falanqeeyeen arima badan
Jaaliyadda Edmonton oo shir isugu yimid ay ku falanqeeyeen arima badan
Waxaa shir aad u balaadhan isugu yimid xubnaha jaaliyada magaalada Edmonton kaasoo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin sare oo ay kamid ahaayeen mudane Maxamed macalin Axmed, DR Maxamuud Ugaas, maxdaxa hay’ada daryeelka Agoonta iyo waxbarashada geeska afrika Dr. C/raxmaan Yuusuf.
Waxaa shirka lagu furay sidii caadada inoo ahayd wacdi diini ah kaa soo uu inoo soo jeediyey sh. C/ xakiim Maxamed Weli wuxuuna ka hadlay in aynu Ilaahay talo saarano si aynu u gaadhno ujeedada aynu leenahay oo ah waajib diini ah. Ilaahay ha inagu anfaco.
Wacdigaa ka dib Waxaa lagu soo dhaweeyey mikrafoonka gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton mudane Ismaaciil C/ laahi kaas oo ka warbixiyey hawlaha jaaliyada u qabsoomay iyo barnaamijyada hor yaala ee la doonayo in la fuliyo sidoo kalena loo baahanyahay in horey looga sii socdo oo la labanlaabo hawsha halganka ee jaaliyada.
Sidoo kale waxaa khudbad aad u qiimo badan soo jeediyey madax hogaanka arimaha ururka iyo dabagalka / waxbarashada ee jaaliyadaha Canada halgame Maxamed aadan dubat wuxuu aad uga hadlay maamulka wanaagsan iyo waxa looga baahan yahay ,wuxuuna carabka ku dhuftay in jaaliyadaha Canada la siin doono aqoon kororsi iyo siminaaro socon doona oo marba qayb la qaadan doono.
Waxaa madasha lagu soo dhaweeyey DR Maxamuud ugaas oo la sugayey warbixintiisa isagoo ka yimid Bariga Afrika gaar ahaan magaalada Nairobi. Wuxuu aad ugu dheeraaday siyaasada geeska afrika taas oo uu sheegay in aan xal loo helaynin ilaa la xaliyo qadiyada ogaadeeniya ,wuxuu yiri maanta halganka ogaadeeniya wuxuu marayaa meeshii ugu saraysay siyaasad ahaan iyo caskariyanba waxaana la idiinka baahanyahay in aad sii dardargelisaan hawshan adag ee aad u xambaarteen shacbigiina dulman.
Isuduwaha jaaliyadaha Canada mudane Yuusuf Ismaaciil ayaa soo jeediyey khudbad aad u qiimo badan isagoo ka hadlay in ay ina horyaalaan hawlo aad u farabadan oo u baahan in la kal a guro sida ay u kala mudan yihiina loo kala hormariyo,kuwaasoo ay kamid yihiin abaabulka bulshada,mudaharaadyo inagu soo socda,udiyaar garowga sidii aan uga qayb qaadan lahayn shirweynaha jaaliyadaha aduunka ee ka dhici doona sanadkan dalka S. Afrika iyo geedi socodka halganka Jwxo hormuudka ka tahay sidii aynu door muuqda uga qaadan lahayn.
Madaxa hay’ada daryeelka Agoonta iyo waxbarashada geeska afrika mudane C/raxmaan Yuusuf ayaa ka warbixiyey wax qabadka hay’ada meesha uu maraayo wuxuuna soo bandhigay Agoonta Soomaalida Ogaadeeniya ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee Kenya taa soo uu yidhi waxay u baahan yihiin in la kafaalo qaado si aynu u badbaadino agoonteena waalidkood u shahiiday halganka lagu xoraynayo ogaadeeniya, wuxuuna ku dheeraaday baahida joogtada ha ee taala xeryaha qaxootiga ee maalin walba sii badanaysa.
Si kastaba ha ahaatee shirkii hawlwadeenada jaaliyada magaalada Edmonton wuxuu ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan oo laga dheehan karo xubnaha wajiyadooda.